Somali – Page 3 – S63 Productions
Wakaaladda wararka ee Itoobiya ayaa sheegtay in 15 qof lagu xiray magaalada caasimada ah ee Addis Ababa, kuwaas oo lala xiriirinayo qorshe lagu weerarayo safaaradda Imaaraatka Carabta Waxay sheegtay in hub, walxaha qarxa iyo dukumiintiyo la qabtay. ...
Irish mountain climber dies in Kenya expedition.
Nin fuula buuraha Irish ayaa dhintay horraantii Khamiista kadib markii ay ku dhacday dhibaatooyin xagga neefsashada ah xilli uu fuulayay meesha ugu sarreysa Kenya - Mount Kenya, ayay sheegtay Kenya Wildlife Services (KWS) Ninkan oo ah 40 jir ayaa dhib ...
Liverpool ayaa kusoo laabatay qaab ciyaareedkeedii cajiibka ahaa iyadoo kooxda heysata Premier League ay guul qancisay ka gaartay Tottenham Hotspur. Kadib shan kulan oo horyaalka ah oo aan wax guul ah la gaadhin - afar ka mid ah goolal la, aan - Liver ...
Zlatan Ibrahimovic ayaa beeniyay inuu adeegsaday ereyo cunsuriyad ah kulankii uu la ciyaaray Romelu Lukaku kulankii Milan Derby habeenkii talaadada. Weeraryahanka AC Milan Ibrahimovic iyo weeraryahanka Inter Lukaku ayaa ku lug lahaa dhowr dhacdo oo ka ...
Bottom side Sheffield United stun Man Utd
Sheffield United oo kaalinta ugu dambeesa kujirta ayaa si layaableh uga heshe guushii Premier League ee ay ka gaadhay Manchester United oo hanatay horyaalnimada Old Trafford. Kooxda Ole Gunnar Solskjaer ayaa u baahnayd seddex dhibcood si ay dib ugu so ...
100 jihadists killed in French-Malian offensive.
Boqol mujaahidiin ayaa lagu dilay bishan duullaan wadajir ah oo ay wada galeen Franco-Malian oo ka dhacay xarunta sharci darada ee wadanka ku yaal galbeedka Afrika. Mali waxay la daalaa dhaceysay kacdoon jihaad doon ah oo ka qarxay waqooyiga wadanka s ...
Soomaaliya waxaa saaran cadaadis sii kordheysa si ay u sharaxdo halka ay ku dambeeyaan askarta qoysaskooda ay ka baqayaan in si qarsoodi ah looga soo daad gureeyay xeryaha tababarka ee dalka ay deriska yihiin ee Eritrea si ay uga dagaallamaan waqooyiga g ...
Somalia seizes illegal high calibre weapons.
Wasaaradda warfaafinta ee dalka Soomaaliya ayaa sheegtay in Soomaaliya ay fashiliyeen isku day la doonayay in dalka lagu soo galiyo "hub iyo saanad sare oo noocyadeeda kala duwan ah" oo ay soo wadeen kooxo maxali ah iyo kuwo shisheeye ah. Wasaaraddu w ...
Kenyan man denies ivory trading charges in US court.
Nin Kenyan ah ayaa ka hor qirtay dambi ah maxkamad Mareykan ah inuu ka ganacsado foolka maroodiga iyo geesaha wiyisha, oo ku kacaya malaayiin doolar. Wuxuu sidoo kale beeniyay eedeymaha la xiriira lacagta la dhaqay iyo ka ganacsiga maandooriyaha waxaa ...